Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့တွင် S Pen အတွက်နေရာရှိသည် Androidsis ပါ
Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ကိစ္စများတွင် S Pen ဖြတ်ထုတ်မှုကိုပြသသည်
ယခုအချိန်တွင်ပေါ်ထွက်လာသောပုံရိပ်အသစ်နှစ်ခုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် S8 Plus နှင့် S8 Plus နှစ်ခုလုံးကို S Pen ဖြင့်စတင်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသောပုံရိပ်အသစ်နှစ်ခုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်တင်ပို့သည်။ Samsung သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Galaxy Note အသစ်ကိုစတင်မည်မဟုတ်ဟုယူဆရသည့်အချိန်၌ကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Galaxy S ပေါ်ရှိ S Pen ကိုကြည့်ပါ.
ဒီပုံနှစ်ပုံကနေလာတာ နှစ်ခုထင် holsters Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus အတွက်ဆိုရင်တော့ S. S. ဟာ Pen S. ဘာလဲဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအချက်နှစ်ချက်ကိုပြတယ်။ တစ်ခုမှာနောက်ဆုံးတွင် Galaxy Note 8 ကိုမတွေ့ရခြင်းသို့မဟုတ် Galaxy series သည် Pen ကိုစတင်မိတ်ဆက်သောအခါတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသစ်အဆန်းတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အရင် Galaxy S8 Plus လို့ပြောနိုင်ပါတယ် တစ် ဦး က S Pen နှင့်အတူထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၎င်းကိရိယာများကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအထူးနေရာနှင့်ထိုကိစ္စရပ်များကိုမြင်တွေ့ရသည့်အခါယခုကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြချက်ပိုပေးနိုင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ခဲတံ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအပြင်သင်မြင်နိုင်ပါသည် ကင်မရာများအတွက်အာကာသ နှင့်အားသွင်းကြိုးနှင့် LED flash ကိုများအတွက်သူတို့အား။ ၎င်းသည်ဖုန်း၏အဓိကကင်မရာတွင်တည်ရှိပြီး LED flash ဘေးတွင်အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာကိုကုမ္ပဏီတွင်ထည့်သွင်းရန်စီစဉ်ထားနိုင်သည်။
အဆိုပါပုံရိပ်နှစ်ခုကို အခြေခံ၍ Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 Plus ရှိသည် အလားတူအမြင်အာရုံရှုထောင့် ဒီဇိုင်းအတွက်, ဆိတ်ကွယ်ရာအရွယ်အစားအတွက်မြင်နိုင်ခြားနားချက်ကနေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့သတိရှိနေဆဲဖြစ်သည် ယိုစိမ့်၏ဤအမျိုးအစားမတိုင်မီ ဒီဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်သွားရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာကျန်ရှိနေသေးသောကြောင့်ဇန်နဝါရီလတွင်ရှိနေသေးသည်။
စားပွဲပေါ်သံသယများဖြစ်စေသည့်အချက်မှာ Galaxy S8 Plus တွင် S Pen ပေါ်လာလျှင်ဖြစ်သည်။Galaxy Note 8 ဘာဖြစ်သွားမလဲ? ၎င်းကိုဖြန့်ချိမည်လား၊ Samsung သည်ယခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းမည်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ကိစ္စများတွင် S Pen ဖြတ်ထုတ်မှုကိုပြသသည်
? Android Tech? ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီက ၆.၂ မှာသာဖြစ်လိမ့်မယ်
အဖြေ? Android Tech?
အကယ်၍ S8 plus S pen နှင့်ခဲတံအတွက်အသုံးချမှုများရှိပါကမှတ်စုတစ်ခုကိုစတင်ခြင်းသည်မည်သည်နည်း။ ဒီဟာကတခြားနာမည်နဲ့မှတ်စုတစ်ခုမဟုတ်လား။
မင်း Note series ထဲကိုအဲဒါကိုမထည့်ချင်ရင်သံသယတွေပေါ်လာမှာဟုတ်တယ်။ S Pen ပါ ၀ င်သော Galaxy S8 Plus သည်အလွန်ကောင်းသောအပိုတစ်ခုနှင့် Note အဟောင်းမှအဆင့်မြှင့်တင်လိုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခု ... မင်္ဂလာပါ။
S8 အပေါင်း S pen ကထွက်လာရင်ငါဝယ်လိုက်ပြီး Note4 ဟောင်းကိုအနားယူတော့မယ်။ ပိုးနဲ့တူတဲ့ Note2 ရဲ့အားသာချက်ကမျှော်လင့်ပါတယ်။
Kit Kat စတိုင်သတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲ